Mankalaza ny Andro Fiakarana isika - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
lahatsoratra > nataon'i Josepf Tkach > Mankalaza ny Ascension izahay
Tsy anisan’ny fety lehibe ao amin’ny kalandrie kristiana toy ny Krismasy, Zoma Masina ary Paska ny Andro Fiakarana. Mety hataontsika tsinontsinona ny maha zava-dehibe io hetsika io. Taorian'ny trauma tamin'ny fanomboana sy ny fandresen'ny fitsanganana amin'ny maty dia toa faharoa izany. Mety ho diso anefa izany. Tsy nijanona 40 andro fotsiny i Jesosy nitsangana tamin’ny maty ary niverina tany amin’ny toerana azo antoka any an-danitra, rehefa vita ny asa teto an-tany. Jesosy nitsangana tamin'ny maty dia mitoetra ao amin'ny fahafenoany mandrakariva amin'ny maha-olombelona azy ary Andriamanitra dia mirotsaka tanteraka amin'ny maha-mpisolovava antsika (1. Timoty 2,5; 1. Johannes 2,1).
Asan'ny Apostoly 1,9- Tatitra 12 avy amin'ny Fiakaran'i Kristy. Rehefa niakatra ho any an-danitra Izy, dia nisy roa lahy niakanjo fotsy niaraka tamin’ny mpianany nanao hoe: Inona no ijoroanareo eto mijery ny lanitra? Ho avy indray Izy, tahaka ny nahitanareo Azy niakatra ho any an-danitra. Izany dia manazava zavatra roa. Any an-danitra i Jesosy ary hiverina.
Ao amin’ny Efesianina 2,6 Hoy i Paoly: “Andriamanitra niara-nitsangana tamintsika sy nampitoetra antsika any an-danitra ao amin’i Kristy Jesosy. Efa rentsika matetika” ao amin’i Kristy izany. any an-danitra izy”.
Nilaza toy izao i John Stott ao amin'ny bokiny hoe Ny Hafatry ny Efesianina: “Tsy manoratra momba an'i Kristy i Paoly, fa momba antsika. Napetrak'Andriamanitra ao amin'i Kristy isika. Ny fiarahana amin'ny vahoakan'Andriamanitra amin'i Kristy no antony mamaritra ».
Ao amin’ny Kolosiana 3,1-4 Manantitrantitra izao fahamarinana izao i Paoly:
« Efa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miafina amin’i Kristy ao amin’Andriamanitra. Fa rehefa haharihary ny fiainanareo Kristy, dia hiara-miseho aminy amin’ny voninahitra koa hianareo”. Ny hoe “ao amin’i Kristy” dia midika hoe miaina amin’ny tontolo roa: ny ara-batana sy ny ara-panahy. Zara raha takatsika izany ankehitriny, nefa i Paoly dia milaza fa tena misy tokoa izany. Rehefa hiverina i Kristy dia hiaina ny fahafenoan’ny maha-izy antsika vaovao. Andriamanitra tsy te hamela antsika ho amin’ny fihevitsika (Jaona 14,18), fa amin’ny fiombonana amin’i Kristy kosa dia tiany hozaraina amintsika ny zavatra rehetra.
Andriamanitra nampiray antsika amin'i Kristy ary afaka miditra amin'ny fifandraisana izay misy an'i Kristy amin'ny Ray sy ny Fanahy Masina isika. Ao amin'i Kristy, Zanak'Andriamanitra mandrakizay, isika dia zanaka malala amin'ny sitrapony. Mankalaza ny Andro Miakatra isika. Fotoana mety tsara hahatadidy ity vaovao mahafaly ity.